လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (2387) ကမ္ဘောဒီးယား (2157) မြန်မာ (1727) ဗီယက်နမ် (1330) ထိုင််း (1072) တရုတ် (332) အင်ဒိုနီးရှား (224) ဖိလစ်ပိုင် (223) မလေးရှား (215) စင်္ကာပူ (193) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (191) တီမော လက်စ်တေ (127) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (122) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (121) Global (110) အိနိ္ဒယ (109) သီရိလင်္ကာ (98) ဂျပန် (97) ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ (92) မွန်ဂိုးလီးယား (92) ဟောင်ကောင် (90) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်... (88) မဲခေါင် (22) Asia-Pacific (17) အာရှ (14) အရှေ့တောင်အာရှ (12) 142 (3) ဘင်္ဂလားဒေရှ် (3) အလယ်အာရှ (3) အရှေ့အာရှ (3) မေ်ာလ်ဒိဗိ (3) နီပေါ (3) တောင်အာရှ (3) အနောက်အာရှ (3) အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာမ... (2) ဩစတေးလျ (2) ဘူတန် (2) ကွတ်ကျွန်း (2) မိုက်ခရိုးနီးရှား ဖ... (2) ဂူအန် (2) ကီရီဘာတီ (2) မာရှယ်ကျွန်း (2) မကာအို (2) မြောက်မာရီယားနား (2) နော််ရူး (2) နိယူအဲ (2) နယူးဇီလန် (2) ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (2) ပစ်ကာရန် (2) ပလော (2)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (4253) ဗမာဘာသာစကား (698) လာအို (572) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (414) ခမာဘာသာစကား (408) ထိုင်း (58) တရုတ် (9) ပြင်သစ် (3) အင်ဒိုနီးရှား (2) ဂျပန် (1) ကိုရီးယား (1)
မြေယာ (763) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (457) စီးပွါးဖြစ် မြေယာလု... (443) အစိုးရ (416) လူဦးရေ (395) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (394) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွ... (377) ပြည်သူပိုင် မြေငှါး... (366) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်... (299) ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထ... (290) သစ်တောမူဝါဒ နှင့် အ... (274) အုပ်ချုပ်ရေး (268) တိုင်းရင်းသားလူနည်း... (267) အစိုးရစနစ် (265) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (262) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (250) စိုက်ပျိုးရေး (211) Sustainable develop... (208) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (197) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (181) သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း နှ... (168) ရပ်ရွာလူထုပိုင် သစ်တော (163) ရေအရင်းအမြစ်များ (157) သစ်တောများ နှင့် သစ... (155) လူ့အခွင့်အရေး (152) သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်... (145) အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ (138) ရွေးကောက်ပွဲများ (130) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (128) ဇီဝမျိုးကွဲများ (119) စီးပွါးရေးဆိုင်ရာမူ... (119) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (118) လာဘ်စားမှုဆန့်ကျင်တ... (112) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (111) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (107) မြေယာနှင့်ဆိုင်သော ... (105) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင... (98) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (97) နိုင်ငံတော်မှကန့်သတ... (97) စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်... (96) သတ္တုနှင့် သတ္တုထွက... (93) ကုန်သွယ်ရေး (90) စွမ်းအင် (86) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု (85) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း... (84) သတ္တုထုတ်လုပ်သန့်စင... (80) ကျား၊မ သဘော (79) နိုင်ငံခြားသား ရင်း... (77) သစ်တောကာကွယ်စောင့်ရ... (77) ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည... (77)
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content Ministry of Health ကပ်ရောဂါ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
The Tourism Development Master Plan Siem Reap 2021-2035 set out2basic approaches in the following: sustainable management of both tangible and intangible heritage assets with...
ကမ္ဘောဒီးယား Profiles - Geographical areas and sites စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း, လူထုအခြေပြု ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
This document details the agreement regarding the establishment of the Phum Thmey community fishery , the list of community members, community statutes, regulations, and...
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) 2018 ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ကုန်သွယ်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် အထောက်အပံ့များ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
This study aims to focus on Cambodia's trade competitiveness, assessment of the legal and regulatory framework for the logistics sector and monitoring and evaluation framework...
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) 2014 ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ကုန်သွယ်ရေး, စီးပွါးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး, နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး, အစိုးရ
ဗီယက်နမ် Issue and policy briefs Rock, F. 2019 တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်ဆက်ဆိုင်သော မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြေယာအမျိုးအမည်သတ်မှတ်ခြင်း
ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ngo Van Hong, Vu Van Me, Tran Ngoc Binh, Le Thi Bich Thuy 2018 တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ, မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြေယာအမျိုးအမည်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ကူညီထောက်ပံ့မှု, သစ်တောများ နှင့် သစ်တောရေးရာ
This report presents an overview of ethnic communities in Vietnam, including their history and development, community structure, living space, population and distribution, and...
ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) FAO 2019 ကျား၊မ သဘော, စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှု မူဝါဒနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု
The Country Gender Assessment (CGA) was commissioned by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) from October 2017 to February 2018 asaway to gauge...
ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) FAO, CIAT and The World Bank 2021 စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် နည်းပညာများ, စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) The World Bank သစ်တောမူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, သစ်တောလုပ်ငန်း
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ Guidelines, instruction manuals, handbooks FAO; Department of Forestry (Forest Assessments) 2021 သစ် မဟုတ်သော သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ, သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံးလွှမ်းမှု, သစ်တောအမျိုးအစားများ
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ministry of Commerce. 2014 ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ကုန်သွယ်ရေး, စျေးကွက်စီးပွါးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, စျေးကွက်များ, တင်ပို့ကုန်များ
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ministry of Commerce 2014 ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ကုန်သွယ်ရေး, စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး, ပြည်သူပိုင် မြေငှါးရမ်းမှု, မြေယာ, အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Andrew Wells-Dang, Kyaw Nyi Soe, Lamphay Inthakoun, Prom Tola,... 2016 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာချက်, အခြေခံအဆောက်အဦများ
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content အစိုးရ, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content The Phnom Penh Post 2019 စွမ်းအင်
Webpage capture on the article of construction date yet to be set for $1.3B coal-fired station, published on 20 August 2019, has detailed the research and development stage​ of...
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Asian Development Bank 2014 ကုန်သွယ်ရေး, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ချည်မျှင်နှင့် ပိတ်စများ, စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး, တင်ပို့ကုန်များ, သွင်းကုန်များ
This study aims to focus on the diversification of garments and tourism in Cambodia to improve the economic growth. Development performance, critical constraint to growth,...
ကမ္ဘောဒီးယား Advocacy and promotional materials Daniel Dietrich, et al. 2016 သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပညာရေးနှင့် အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း။, အင်တာနက်
The handbook is about how to unlock the potential of official and other information to enable new services, to improve the lives of citizens and to make government and society...
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ministry of Commerce 2021 အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Ministry of Commerce, International Trade Center 2006 ကုန်သွယ်ရေး, စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး, တင်ပို့ကုန်များ
This national export strategy aims to improve Cambodia's exports. It focuses on the introduction and rationale, an assessment, strategy design process and paradigms, export...